Tag: mobile anabata | Martech Zone
Kpido: mobile na-anabata
Ahịa ahịa nke taa na-asọ asọmpi. N'ihi nke a, nke a na-etinye ọtụtụ nrụgide nye ọtụtụ ndị ọka iwu na ụlọ ọrụ iwu ka ha pụọ ​​na asọmpi ndị ọzọ. O siri ike na ọ bụ ịgbalịsi ike ka ndị ọrụ nọrọ na ntanetị. Ọ bụrụ na saịtị gị anaghị amanye ndị ahịa, ndị ahịa na-aga n'ihu ndị asọmpi gị. Ọ bụ ya mere, akara gị (nke ahụ gụnyere weebụsaịtị gị) kwesịrị ịmetụta azụmaahịa gị nke ukwuu, nyere gị aka ịchọta ndị ahịa ọhụụ, ma bulie ya elu
Naanị taa mụ na onye ahịa nwere ọrụ dị egwu nke na-adọta ọtụtụ saịtị ha. Njikọ aka ahụ dị mma, na ọdịnaya ahụ na-eme njem okporo ụzọ, mana enwere naanị otu nsogbu. Companylọ ọrụ ahụ enweghị ụdị ọkpụkpọ oku ọ bụla iji duru ndị ahịa gaa n'ahịa ha. Kachasị, ha chọrọ oku na-eme ihe nke meghere onye ọbịa ahụ na peeji ọdịda dị oke mkpa nke na-enyere aka ịkwanye onye ọbịa ahụ.
N'agbanyeghị na ịrị elu na ojiji ekwentị, ọtụtụ weebụsaịtị na-anapụta ahụmịhe mkpanaka na-adịghị mma, na-amanye ndị ahịa nwere ike ịpụ na saịtị. Ndị ọchụnta ego bụ ndị mụtara ịnyagharịa desktọọpụ na-esiri ya ike ịmegharị na ekwentị. Chọta ihe ịchọ mma kwesịrị ekwesị naanị nwere ike ịbụ nsogbu. Ndị ọchụnta ego ga-arụsi ọrụ ike iji ghọta ndị na-ege ha ntị lekwasịrị anya ma wuo nhazi ha na imewe ha gburugburu onye na-azụ ahịa. Rịọ ndị ahịa nwere ike ịdị mfe mgbe niile
You nwetụla mgbe ị na-achọ ọchụchọ maka ebe nrụọrụ weebụ gị na Google wee hụ mkpado enyi na enyi na ya? Google nwere ihu akwụkwọ nnwale na-agagharị agagharị ebe ị nwere ike ilele nsogbu na saịtị gị. Ọ bụ ezigbo ezigbo ule na-enyocha ihe ma na-ejide n'aka na ha na-agba ọsọ nke ọma ma na-ahụ anya. Ekwentị mkpanaaka abụghị nke kachasị mma, agbanyeghị. Ọ bụ naanị ntọala na-adịghị ele anya n'ezie ọrụ omume nke mobile ọrụ na gị
Ahụmahụ ekwentị na Mmetụta ya na nddị
Na Tọzdee, Septemba 1, 2015 Na Tọzdee, Septemba 1, 2015 Douglas Karr
Ikike nke Smartphone abụghị naanị ịrị elu, maka ọtụtụ ndị mmadụ ọ bụ ụzọ ha niile nke ijikọ na Internetntanetị. Njikọ ahụ bụ ohere maka saịtị e-commerce na ebe a na-ere ahịa, mana ọ bụrụ na ahụmịhe onye mbịambịa gị karịrị ndị asọmpi gị. Gburugburu ụwa, ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ka ima elu si ama nwe. Mụta otu esi agagharị na mkpanaka na-emetụta ọdịnihu nke e-azụmahịa na ụlọ ahịa mkpọsa n'ozuzu ya.